यौन स्वास्थ्य Archives - Page9of9- HealthyKhabar
सेक्स पछि के गर्दा सम्बन्ध बलियो हुन्छ !
सेक्सपछि दुई जनामध्य एक निदाउनु सम्बन्धका लागि राम्रो मानिदैन । सेक्सपछि पनि समयलाई रोमांचित र मायालु बनाउन सकिन्छ । जसले दाम्पत्य सम्बन्ध अझ प्रगाढ र सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ । सेक्स लगत्तै यसो गर्नुहोस् -यौन सम्पर्कपछि अलग दिसातर्फ फर्केर सुत्नु राम्रो होइन । बरु एकअर्काबीच अझै टाँसिएर वा कसिलो अंकमाल गर्दै कुराकानी गर्नुहोस् । कुराकानीमा पुराना याद ताजा गर्नुका साथै, पुराना डेट तथा मुमेन्टलाई सम्झिदा अझ रमाइलो हुन्छ । -यौन सम्पर्कपछि सँगसँगै सावर लिनु वा हट टबमा समय बिताउँदा अझै निकट भएको महशुस हुन्छ । यसले दुबैको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । -यौन सम्पर्कपछि तत्काल बाहिर जाने काम छैन् वा मन छैन् भने दुबै जनाले सँगै बसेर फिल्म हेर्नु राम्रो मानिन्छ । सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । तर फिल्म दुवैलाई मनपर्ने खालको हुनु जरुरी छ । सेक्सपछि पनि एक अर्काबीच शारीरिक तथा मानसिक सम्बन्ध बनाइराख्नको लागि एकले अर्कोको शरीरमा मालिस अर्थात मसाज…
शनिवारको रात महिलाहरुलाई हुन्छ अत्यधिक यौन चाहना
काठमाडौं , फागुन । बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी सेक्सी हुनेगरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ । बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्दैन । त्यो दिन भनेको शनिवारको रात हो । अध्ययनका अनुसार महिला आफुलाई ‘सिडक्टिव फिल’ गराउन विभिन्न तरीका अपनाउँछन् । उनीहरू शनिवारको रातलाई विशेष बनाउन तातो पानीले नुहाउने, नयाँ कपडा लगाउने र पुश अप ब्रालगाउन मन पराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र सेक्सी स्माइल बढी प्रयोग गर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । २००० महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूमको हल्का स्प्रे स्पेसल फिल गराउन प्रयोग गर्छन् जसले आफ्नो पार्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् । उक्त समयमा महिलाहरुले सेक्सी लुक पाउन नियमित व्यायाम गर्ने, टाइट फिटिङ कपडा लगाउने, शर्ट स्कट र गहना लगाउनले पनि सर्भेका क्रममा भेटिएका छ । एजेन्सी
पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ? हेर्नुस् विज्ञहरूको एक अध्ययन
काठमाडौं । पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो ? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरि सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ। नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन। ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनमा धेरै युवाहरूले कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राखेर आफ्नो कौमार्य गुमाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको बताएका छन्। अध्ययनमा सहभागी एकतिहाइभन्दा बढी युवती र एकचौथाइभन्दा बढी युवकले आफूले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा आफ्नो उमेर नपुगेको स्वीकारेका थिए। ब्रिटेनमा यौनसम्पर्क राख्ने सहमति जनाउन कम्तीमा १६ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हालै सार्वजनिक गरिएको नेश्नल सर्भे अफ सेक्सुअल आटिट्युड्स एन्ड लाइभस्टाइल्सका अनुसार १६ वर्षको उमेरमा धेरै मानिसहरू पहिलो यौनसम्पर्कका लागि तयार नभएका हुनसक्छन्। झन्डै १० वर्षमा गरिने सो अध्ययनले ब्रिटेनका नागरिकहरूको यौनसम्बन्धी व्यवहारबारे विस्तृत जानकारी दिन्छ। लन्डन स्कूल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको यो अध्ययन सन् २०१० देखि २०१२ भित्र सर्वेक्षणमा सहभागी युवावस्थाका तीन हजार जनाको उत्तरमा आधारित छ। अध्ययनका निष्कर्षहरू: अध्ययनमा सहभागीमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत…
कन्डम निःशुल्क हुने, स्यानिटरी प्याड किन नहुने?
घोराही- पुरुषको आवश्यकतासँग जोडिएको कन्डम निःशुल्क हुने तर, महिलाका लागि नभै नहुने स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने? अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ। धेरैजसो अधिकारकर्मी तथा नारी समानताका लागि काम गर्दैआएका सङ्घसंस्थाले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन्। एक महिलाले किशोरी अवस्थामा प्रवेश (११ देखि १५ वर्ष) गरेदेखि करीब ५०/५२ वर्षको उमेरसम्म मासिक धर्म अर्थात् महिनावारीलाई बेहोर्नुपर्छ। खर्चकै हिसाबले पनि यो महङ्गो पर्छ। वर्षभरि खानै नपुग्ने दुर्गम भेगका महिलाले जे गरेर भए पनि यसको जोहो गर्नैपर्छ। दाङको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने एउटा विद्यालयमा आयोजित सचेतना कार्यक्रमका एक किशोरीले जुरुक्क उठेर भनिन् –'बजारमा कसैले बार्दैनन्। गाउँमा हाम्ले मात्रै किन बार्ने?' महिनावारी बार्नु कष्टकर छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। घोराहीकी सामाजिक अभियन्ताकी ११ वर्षीया छोरी पहिलो पटक महिनावारी भइन् । कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी उनलाई महिनावारी के हो थाहा थिएन। न विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश थियो, न परिवारमा यसबारे कसैले कुरा गरेको उनले सुन्न पाइन्। साथीहरुले यसबारे चर्चा गरेको उनलाई थाहा थिएन । महिनावारी…